DHAGEYSO: ”Waxaa jira goobo uusan weli ka dhaqan-gelin amarkii dowladda Soomaaliya‘‘ … | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: ”Waxaa jira goobo uusan weli ka dhaqan-gelin amarkii dowladda Soomaaliya‘‘ …
DHAGEYSO: ”Waxaa jira goobo uusan weli ka dhaqan-gelin amarkii dowladda Soomaaliya‘‘ …
Korneyl Maxamed Aadan Koofi
Muqdisho (Halqaran.com) – Korneyl Maxamed Aadan Koofi, agaasimaha Hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka hadley go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtey Xaduudaha dalka iyo meelaha qaar oo la sheegay in uusan ka dhaqan gelin.
Mar uu la hadlayay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayuu sheegaya, in Ciidamada Ammaanka iyo Hay’adda socdaalka amarada lagu xiray Xaduudaha dalka si loga hortago Cudurka Coronavirus, isaga oo qorey inay jiraan meelo kamid ah dalka oo Amarkaasi uusan ka dhaqan gelin.
Korneyl Koofi ayaa intaasi ku daraya, in ay socdaan daddaalo kale oo lagu doonayo in lagu dhaqan geliyo amaradaas, isla markaana ay kala kaashanayaan dowlad goboleedyada ka jira dalka.
Ugu dambeyn, hadalka agaasimaha hay’adda socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ku soo aadayaa xilli dowladda ay horey ugu dhawaaqdey in la xiray Xaduudaha dalka lana joojiyey duulimaadyada Caaamiga ah, balse magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka qaar si caadi ah Jaad (Qaad) lagu soo geliyo.
Amarka dowladda weli ma dhaqan gelin